#Breaking_News. Miseensonni Humna addaa Oromiyaa 13 duula Shanee funaanuu jedhuun bobbaafama WBOtti makamanii jiru. – Kichuu
HomeAfaan OromooNews#Breaking_News. Miseensonni Humna addaa Oromiyaa 13 duula Shanee funaanuu jedhuun bobbaafama WBOtti makamanii jiru.
Miseensonni kunneen nagayaan harka kennachuufi mooraa leenjii qabsoo bilisummaa Oromootti makamuu rippoortarri keenya Jaal Hambisaa Roorroo dirree waraana Lixaarraa nuuf gabaasee jira.
Ameerikaan Tarkaanfii Waraanaa Garee mootummaa Abiyyi Ahimad Irratti Fudhachuuf Qarqara geessee jirti ! Odeeffannoo guyyaa har’aa ba’aa jiruun Ameerikaan misaayilootaafi jeettiiwwan waraanaa gara Port Sudaanitti ergitee jirti. Kunis, tarkaanfii waraanaa mootummaa Shaabiyaa fi Leellistoota Amaaraa irratti fudhachuuf qophiin xumuramaa jiraachuu kan agarsiisuu dha.
Isa booda gara paartii Abiyyi Ahimad aangoo irraa kaasanii mootummaa Cehumsaa dhaabutti deemama jedha odeeffannoon arganne. Kanas milkeessuuf yeroo dhiyoo keessatti guutuu Tigraay dhorkaa balalii qilleensaa (No fly Zone) Ameerikaatin labsamuuf jira jedhamaa jira.
Rakkoon sababa dadhabbina hooggansaatin Itoophiyaa keessatti uumamaa jiru kallattiin faayidaa Ameerikaa kan tuquudha jettee jrti Ameerikaan. Kanaafuu, yeroo lammiileen nagaa ajjeefaman teenyee ilaaluu hin dandeenyu jechuun Gaafatamaan Haajaa Alaa Ameerikaa, Antoonii Biliinken kaleessa Kongiresiitti dubbatan.FSM irraa
Dhaaloonii quubee gaabruummaa in feettuu!!!!!!!!!
Godina Booranaa Aanaa Waacilleeti Ummaatni Hiriira guddaa lafa shochoosu gaggeessa jira.!!
Gaazixessaan duraanii omn Usman Ukkumee mootummaa naannoo Oromiyaatiin Hidhamee jira. Ji’aata muraasaan dura Bilxiginnaatti makamee ture. Garuu amma hidhamuu isaa mirkaneeffannee jirra.
Aadde Keeriyaa Ibrahim Dabalatee qondaalonni waraanaa fi siyaasaa Tigraay dabalataa hiikaman.
Torbee lama duras qondaalonni waraanaa 4 ta’an himanni isaanii adda citee hiikamuum kan yaadatamuu dha.
Gareen mootummaa Biltsiginnaa muddama keessa seenee TPLF wajjiin jaarsumma kadhachaa jira. TPLF garuu Biltsiginnaa wajjiin haasa’uuf haala duree kaa’ee ture. Haala dureewwan ka’aman keessaa tokko qondaalota hidhaman hatattamaan gadhiifamuu qaban kan jedhu ture.
Kunoo amma mootummaan muddamee gadhisuu jalqabee jira.kan oromoo garuu kumaatamaan hidhaatti galchaa jirti ppn.
‹‹ማዕቀብ እጥላለሁ››የአውሮጳ ሕብረት፣ ሕወሓቶች ተፈቱ፣ ሠላም አስከባሪ ጦር በትግራይ? አሜሪካ በምዕራብ ትግራይ፣ ባንኮች ብር ቸገራቸው|Ethio Forum
EU floats Ethiopia sanctions over humanitarian aid – https://t.co/630n7fqPjQ pic.twitter.com/wDfDxbEwBf
— Kichuu (@kichuu24) March 11, 2021